I-China 45 HRC Square End mill-4 Flute D4mm abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
Ukwaneliseka kunye nekhredithi elungileyo kuye wonke umthengi yeyona nto iphambili kuthi. Sigxile kuzo zonke iinkcukacha zokwenza iodolo kubathengi de bafumane iimveliso ezikhuselekileyo nezisandi ngenkonzo elungileyo yokuhamba kunye neendleko zoqoqosho. Kuxhomekeke koku, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe ase-Afrika, eMid-East nakwi-Southeast Asia.
Ngokusekwe kwiinjineli ezinamava, zonke iiodolo zokwenza umzobo ezisekwe okanye ezisekwe kwisampulu zamkelekile. Siphumelele igama elihle kwinkonzo yabathengi ebalaseleyo phakathi kwabathengi bethu baphesheya. Siza kuqhubeka sizama konke okusemandleni ukukunika iimveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo efanelekileyo. Sijonge phambili ekukhonzeni.
Siza kubonelela ngeemveliso ezingcono kakhulu kuyilo olwahlukeneyo kunye neenkonzo zobungcali. Sibamkela ngokunyanisekileyo abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba batyelele inkampani yethu kwaye basebenzisane nathi ngokwesiseko sexesha elide kunye nokuxhamla.
Egqithileyo I-45 ye-HRC yokuphela kwesikwere-4 ifluti
Okulandelayo: I-55 HRC Carbide 2 Flute Micro Isiphelo seMill